Canadanepal.net: सर्वदलीयमा राजावादीको आन्दोलन घुस्नु दुर्भाग्यपूर्ण ! बिरोध खतिवडा । POWERNEWS
सर्वदलीयमा राजावादीको आन्दोलन घुस्नु दुर्भाग्यपूर्ण ! बिरोध खतिवडा । POWERNEWS
सर्वदलीयमा राजावादीको आन्दोलन घुस्नु दुर्भाग्यपूर्ण ! बिरोध खतिवडा । POWERNEWS Presenter:- Tek Narayan Bhattarai